Hatao mandritra ny 2 andro izao atrikasa izao ahafahana mametraka sy manamafy orina ny fifanatonana sy fifampiresahan’ireo mpisehatra rehetra mba hijerena ny laharam-pahamehana miainga amin’ny tarehimarika misy manodidina ny fambolena eto Madagasikara. Tsiahivina fa tamin’ny taona 2004/2005 no nisy fikirakirana tarehimarika momba ny fambolena farany teto Madagasikara ka izay no mahatonga ny fiaraha-miasa amin’ny tetikasan’ny firenena mikambana ho amin’ny sakafo sy ny fambolena (FAO) hanatanterahana izany. Anisan’ny votoatin-dresaka tamin’izany ny tsy fahampian’ny vaovao sy ny tarehimarika manaraka ny toetr’andro ny amin’ny sehatra fambolena sy ny tontolo ambanivohitra izay tena ilaina amin’ny fampiroboroboana sy ny fanaovana ny politika hampandrosoana io sehatra io. Ny tsy fisian’ny tarehimarika azo antoka sy marina amin’ny sehatra fambolena anefa dia miteraka olana lehibe ka mitarika hatramin’ny sakana amin’ny fampandrosoana ara-toekarena. Iaraha-mahalala ny fiankinan’ny fiarahamonina sy ny toekaren’i Madagasikara amin’ny fambolena ka tena ilaina ny fahafantarana mazava sy ny fifehezana ny tarehimarika rehetra manodidina izany.